सुखानीबाट खड्ग ओलीलाई चिठी
चिठी कल्लाई पुर्‍याउने थाहा नभएको होइन। खामकै दाहिने कुनामा लेखिएको छ, प्रापकको नाम।
यो नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली उर्फ केपी ओलीको नाममा आएको चिठी हो, सुखानीबाट।
‘दाइ काँसम्म जाने हो?’
सुखानी त्यही बीचमा पर्ने सालको घना जंगल भएको ठाउँ हो। इलाम र पाँचथरका मान्छे पहिले नुन बोकेर यही बाटो शनिश्चरे जान्थे रे। अझै पनि यहाँ डाँका लाग्छन् भनेर सितिमिति मान्छे हिँड्दैनन्।
त्यस दिन अलि अबेर भएकाले मैले गाडी समात्न भ्याइनँ। डरले थुरथुर काम्दै भए पनि जंगलको बाटो नछिचोली धरै भएन।
बस्तीको नाममा एउटा झुपडी पनि नभएको त्यो जंगलमा के गर्न जानुपरेको होला यिनलाई? त्यसमाथि यो रातमा! यति हतारिँदै!
कालो अनुहार। चिम्सा आँखा। थेप्चो नाक। जिङरिङ्ग कपाल र झुस्स दारीले बडो फोहोरी देखिन्थे। हाडछाला मात्रै बाँकी थियो उनको ज्यान। उसै परे एक–एक हड्डी गन्न मिल्ने। अलिअलि रगत नसाबाट बगिरहेको पनि भेउ पाइने। लुगाका नाममा माथि पातलो स्यान्डो भेस्ट लगाएर मुनि उस्तै पातलो गाम्छा बेरेका थिए। मेरा आँखा उनका गोडातिर गए। खालि खुट्टा हिँडिरहेका रहेछन्।
मैले निकैबेर एक शब्द बोल्न सकिनँ। उनी पनि केही बोलेनन्।
निर्जन जंगलमा हामी सँगसँगै हिँडिरह्यौं, बस्!
‘को रामनाथ?’ अलि बेरमा साहस बटुलेर सोधेँ।
मेरो प्रश्नले उनको निधारमा मुजा परे। आँखीभौं तन्किए। चिम्सा र चिसा आँखा एकाएक ठूला र ताता भएर आए।
‘म बेपार गर्नेजस्तो देखिन्छु! दलालजस्तो देखिन्छु!’ उनको हिँडाइको गति घट्यो, स्वरको गति बढ्यो, ‘गरिब जनताको शोषण गर्ने बेपारीजस्तो देखिन्छु म!’
‘कुन कम्युनिस्ट पार्टी?’
‘अहिले बाँचेको कम्युनिस्ट पार्टी यही एउटा त हो नि। अरूको त के कुरा गर्नु! रायामाझी दरबार पसिहाले। पुष्पलालले केही गर्न सकेनन्। बाँकीलाई आफूआफूमा लडाइँ गर्दै ठीक्क छ।’
उनको कुराले मलाई थप रहस्यमा तान्यो। पुष्पकमलको सट्टा पुष्पलाल र भट्टराईको सट्टा रायामाझीको कुरा गर्ने यी मनुवा कुन जमानाको कम्युनिस्ट पार्टीको कुरा गर्दैछन्!
‘माओवादी त जंगलबाट सहर छिरिसके, तपाईंका यी नेता के अझै भूमिगत छन्?’ मैले भनेँ, ‘सुखानीमै लुकिरहेका छन् कि क्या हो?’
‘रामनाथ बाजेको नाम नसुन्ने तपाईं निकै पछिको पुस्ता पर्नुभो। पञ्चेतकालको कुरा तपाईंलाई था हुन्न र मत्रै हो। पञ्चेतकालमा रेडियो सुन्ने सबै नेपालीलाई था छ उनको नाम?’
‘को हुन् त दाइ उनी?’ मैले लत्तो छाडिनँ।
‘त्यतिबेलै मारिएका मान्छे कसरी भेट्नुहुन्छ त अनि?’ म घोर आश्चर्यमा परेँ।
उनले मेरो प्रश्नको जबाफ दिएनन्। मेरो अनुहारतिर हेरे, फिस्स हाँसे।
‘भोलि नै फर्किन्छु।’
हाम्रो देब्रेपट्टि सुक्न लागेको सुखानी खोलो बगिरहेको थियो। यो एउटा खहरे हो। दाहिनेतिर सानो पार्क बनाइएको रहेछ, सुखानी सहिद पार्क। नजिकै स्वागतद्वार पनि थियो।
उनले मलाई त्यहाँ भएका पाँचवटा सालका रुख देखाए। एउटा रुखतिर औंला तेस्र्याउँदै भने, ‘उहाँ रामनाथ बाजे, कमरेड रामनाथ दाहाल।’
मैले बिदा मागेँ।
‘दानाबारी कहाँ पुग्नुपर्ने हो?’ उनले सोधे।
‘टाढा छैन। नआत्ती गए हुन्छ,’ भने, ‘अलि अगाडि ज्यामदार आउँछ। त्यहाँबाट त नजिकै हो शुक्रबारे बजार।’
म टाउको हल्लाएर हिँडे।
मेरा मनमा अनेक तर्कना आउन थाले। यो अँध्यारोमा मान्छे मारिएको ठाउँ चहार्ने यी मनुवा को होलान्? के यी पागल हुन्? कुरा गराईमा त सध्दे नै थिए!
मनमनै ठम्याएँ, जिन्दगीभर राजनीतिमा होमिएका यिनी जीवनको उत्तरार्द्धमा घोर दु:खले पेलेपछि दिमाग सड्कियो होला! साथीहरू सत्तामा पुग्दा पनि आफू रित्तो हात बस्नुपरेकाले निराशामा डुबेर यस्तो भएको हुनसक्छ!
त्यति लामो कुराकानी हुँदा मैले उनको नामै सोध्न भुलेँछु। अहिले थाहा भयो, डेकेन्द्र राजवंशी।
फोटो हेरेँ। काटीकुटी उनै हुन्।
लेखिएको विवरण यस्तो थियो :
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, आश्विन २९, २०७२ १३:५७:१९